बहिनी भेट्न जाँदै गरेका शंकरको बाटोमै गयो ज्यान, आमाको अवस्था ग म्भीर – PathivaraOnline
Home > समाज > बहिनी भेट्न जाँदै गरेका शंकरको बाटोमै गयो ज्यान, आमाको अवस्था ग म्भीर
एजेन्सी । शंकर भुलको एउटा सुन्दर परिवार थियो। आमा, ग र्भ व ती श्रीमती, दुई दाजुभाई र दुई वटा छोराछोरी। भरखरै मात्र बिहे गरेकी बहिनीको मायाले सताइरहँदा बहिनी भेट्न उनी मोटरसाइकलमा डडेल्धुरा जाँदै थिए। मोटरसाइकमा सवार उनकी आमा पनि छोरीलाई भेट्न पाइने भयो भन्दै उ त्सा हित थिइन। तर डोटीबाट हिडेका उनीहरु डडेल्धुरा पुग्न पाएनन्। बिचबाटोमै उनीहरुको दु र्घ ट ना भयो।
भारतमा मजदुरी गर्ने ३२ वर्षीय शंकरले उक्त घ ट नाबारे सायद कल्पना समेत गरेका थिएनन्। लकडाउनका कारण नेपाल आएका उनी अब आफ्नो परिवारसँग जीवन बिताउन पाउने छैनन्। त्यो दिनको दु र्घ ट नाले उनको दे हा न्त भयो।
साह्रै दुखद खबर: दशैको मुखैमा जिपले स्कुटरलाई ठक्कर दिदा तारा विक रहिनन हामी माझ
पोखरा। पोखरा–बाग्लुङ सडकखण्डमा गएराति भएको सवारी दु र्घ ट नामा परी एक जनाको मृ त्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२ बाग्लुङ बसपार्क अगाडि राति हरिचोकबाट जिरोकिमीतर्फ आउँदै गरेको ग१ज ५८९६ नंको बलेरो जीपले बाटो का ट्ने क्रममा ग १२ प ५३१३ नंको स्कुटरलाई ठ क्क र दिँदा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–७ धम्पुसका २६ वर्षीया स्कुटर चालक तारा विकको मृ त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालले जानकारी दिनुभयो ।
दु र्घ ट ना लगत्तै घा इ ते विकलाई उपचारका लागि फिस्टेल अस्पतालमा पु¥याइएकामा चिकित्सकले मृ त घोषणा गरेको बताइन्छ । प्रहरीले जीप चालक गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका–९ बस्ने २१ वर्षीय सुदीप विकलाई नियन्त्रणमा लिएर घ ट नाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना! भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने!!
यिनै हुन् सुजातालाई हत्या गर्ने पापी, अनुसन्धानमा खुल्यो यस्तो सबैलाइ चकित पार्ने रहस्य